ကွန်ပြူတာမှာသုံးရန် CyberLink YouCam 5...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ CyberLink YouCam 5...လေးအသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ကျွန်တော် အရင် YouCam4လေးတင်ပေးပြီသွားပြီ...! Update... လေးထွက်လာတိုင်း သုံးချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! ဖိုင်ဆိုးကတော့ 150 MB ပဲရှိပါတယ်...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "ကွန်ပြူတာမှာသုံးရန် CyberLink YouCam 5...!"